Gonzalo de Berceo, mudetembi wekutanga wechiSpanish | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Biography, Nhetembo
Gonzalo de Berceo aive mudetembi wechiSpanish; saizvozvo, Iye anozivikanwa zvakanyanya nekuonekwa seyekutanga mukutengesa kwake mumutauro wechiSpanish. Iye anokosheswa mune renyika nyika yehunhu hwekunyora kwake kwepakati nepakati. Basa rake rakamubata semunyori uye mufundisi, achitora zvinzvimbo zvakakosha kwazvo. Mabasa ake akakurudzirwa nekuzvipira kwake kukuru uye rudo rwekutenda kwechiKristu.
Kunze kwekunakidzwa nemukurumbira munguva yake yekuve murume wekutenda, Gonzalo de Berceo akakwanisa kudarika nguva nekuda kwebasa rake semunyori. Iyo tarenda yetarenda yeiyi inosimudzira ndeyekuti yakangofananidzwa nevanyori vechimiro chePer Abbat, munyori (compiler) we Rwiyo rwangu Cid.
2 Kugadzikana kwemonaki
3 Kunamata kwanyanduri
4 Iye Mester weVafundisi
4.1 Iyo cuaderna kuburikidza nebasa raBerceo
4.2 Basque mune basa raBerceo
5.1 Chimiro chisingaperi
5.2 Utatu hwenhetembo neshanduro
5.3 Nguva pane vatsvene
5.4 Marian azvino
5.5 Nezve dzidziso
6 Zvishamiso zvaMai Vedu, chidimbu (mavhesi kubva muna 1265 kusvika muna 1287)
7 Zadza runyorwa rwemabasa ake
7.3 Mamwe mabasa
Maese Gonzalo de Berceo akaberekwa pakupera kwezana ramakore regumi nembiri, pamwe panenge pazana 1195 kana 1198, muBerceo, Spain. Iyi nharaunda iri pakati peSan Millán de Cogolla (La Rioja) neCalahorra, (Logroño). Kunyangwe pasina zvinyorwa zvehupenyu hwemhuri yake kwakatangira kana hudiki hwake sekudaro, zvinozivikanwa kuti aive nehama, iyo yakaramba yakazvipira kuchechi semufundisi.
Semwana, Gonzalo akarererwa mumonastery yeSan Millán de Suso. Nekudaro, imba yake yekudzidzira yaizopera makore gare gare ichave imba yemamongi yakavakidzana yeSan Millán de la Cogolla. Ikoko, akagamuchirwa semupristi wepasirese. Zvino muna 1221 akaita nzira yake semudhikoni.
Muna 1222, iyo Riojan yakatungamira kudzidziswa kwake mune yakakurumbira Studium Generale de Palencia - yekutanga yunivhesiti fomati muMiddle Ages. Gare gare, muna 1227 uye pasi pekutungamirirwa naBhishopi Don Tello Téllez de Meneses, Berceo akapedza zvidzidzo zvake zvedzidzo yepamusoro. Nechiitiko ichi, akazvimisikidza senhengo yakakosha uye anonyanyisa kuburitsa paster yevafundisi.
Kunze kwemupristi nemadhikoni, Uyu aiti anonamata aishandawo semupristi. Akazviita kubva mugore ra1237. Yakakodzera kuve akarererwa mumamongi - uye aine masimba makuru ehutariri - basa rake harina kumira ipapo. Paakangowana mukana, akabva azvishandira semutungamiri wemapoka evanoziva.
Panguva imwecheteyo, akashanda semudzidzisi wekureurura uye muchechi gweta. Iko kusiana kweruzivo rwake uye kudzidziswa kwakakura kwakamuita iye anotungamira mudzidzi, mudzidzisi, munyori, uye nyanzvi yekunyora.
Hupenyu hwake semumonki hwakasarudzira hutungamiriri hwaizotora mavhesi ake nemabasa ekurondedzera. Moyo webasa rake rekunyora waigara uri madimikira ekunamata uye zvechitendero. Master Gonzalo akaona kukudzwa uye kureruka paakataura mazwi ake kuvasande uye vanamwari vakafarira kukudzwa kwake mumamongi.
Mabasa ake akazove iyo nzvimbo yaakatangazve kuzvipira kwake kwechechi uye rudo rwekutenda. Uye zvakare, vaive iyo nzira yekusvika kune imwe pedyo nevanhu uye vane mukana wekuwedzera kwavo kwechitendero pamwe nenhetembo mavhesi.
Basa rake rakanyorwa raive rakavakirwa zvakanyanya pahagiographies. Ndokunge, mumabasa ehupenyu akanangana nevatsvene nemimwe mifananidzo yechitendero.
Iye Mester weVafundisi
Mumwe haakwanise kutaura nezve hwaro hwe mester de clerecía pasina kutaura Gonzalo de Berceo. Nekugara munzvimbo inotungamira muchikoro chevarume vakadzidza, Uyu munyori wepakati nepakati anga ari pabasa rakaoma rekugadzira nekunatsa mutauro wechiCastilian zvizere. Zvese izvi, kuitira kuti upfumise mabhuku uye uwane manyorerwo awo.
Mushure mekubatanidza rurimi rwake rweRiojan - rwakajairika kumaruwa - nhetembo dzemimhanzi, nemamwe mafomu ekunyora uye naamai vemitauro yeRomance, chiLatin, mudetembi - pakupedzisira - akaenda. Mhedzisiro yeiyi yose fusion yakapa nenzira yakanyanyisa mukuwedzera kwemutauro weSpanish wakabatanidzwa pasi rese, kuvhura nzira, zvakare, kune a nhetembo yehunhu hunhu.
Iyo cuaderna kuburikidza nebasa raBerceo
Maitiro akarimwa naGonzalo de Berceo, uye akazo gamuchira mester wevafundisi, anozivikanwa se cuaderna kuburikidza. Icho chimiro che stanza chinowanzoitwa mita yeSpanish. Iyo inoumbwa nendima ina dzema syllable gumi nemana (Alexandria), akapatsanurwa kuita mahemistichs maviri emashiripiti manomwe. Zvese zvine consonant rhyme.
Iro zita reiyo furemu kuburikidza Iyo inouya kubva kune rekutanga basa muchiSpanish rakanyorwa nenzira iyi. Zviri pamusoro Bhuku raAlexandre, nhetembo yekunyora kusingazivikanwe nezve hupenyu hwaAlexander Mukuru. Izwi rechiLatin rinoreva Quadrivium, kuumbwa kwezvidzidzo zvakajairika zvenguva.
Iyo furemu kuburikidza Ndiyo Castilian vhezheni yeAlexandria ndima yeFrance yakabva. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kuSpain ichi chishandiso chaimbove chimiro chinongoshandiswa chete nenhengo dzevafundisi kana varume vane zvidzidzo.
Basque mune basa raBerceo
Nhoroondo inorondedzera kuti muSan Millán de la Cogolla monastery - uko Gonzalo yaive padyo - Basque yaitaurwa, pamwe chete nemataundi mazhinji ari pedyo eRiojan. Kunyangwe nyanduri ane mukurumbira akadzidza chiLatin nemimwe mitauro yeRomance kuburikidza nedzidziso yake yechechi, mazwi echiBasque anga asingashome mumabasa ake.
Muchokwadi, chikamu chakakura chemabasa, shanduro uye zvinyorwa zvakawanikwa naGonzalo de Berceo zvakanyorwa muBasque. Uyu mutauro pamwe ndiwo wekare kwazvo muEurope. Iyo inonzi "Basque" yaishandiswa zvakanyanya munguva dzepakati, senge chiLatin neCastilian. Muchokwadi, zvinogona kunge kuti munyori akabatsira zvakanyanya mukuumbwa kweyekupedzisira.
Chikamu chedetembo naGonzalo de Berceo.
Zana ramakore rechiXNUMX rakashongedzwa nepeni yemunyori anokudzwa uyu. Maitiro aGonzalo de Berceo uye rudo rwake rwenhetembo zvakamutungamira kuti awedzere mabhuku. Basa rake raive risina mamwe uye asiri pasi pe13.000 ndima. Hazvina maturo iye kupihwa zita rekuti "Baba veCastilian nhetembo." Vamwe vatsoropodzi vanotsanangura basa rake rehungwaru serakakura uye rinoshamisa.
Kukwanisa kwake kunyora hakuna kumboburitsa fomu yechisimba, zvinopesana. Berceo akashandura nhetembo dzakajairika, dzechinyakare, dzinozvininipisa, nemusha uye kubata kwechitendero. Ruzivo rwake mukushandurwa kwemabasa akambonyorwa muchiLatin, zvakaunzawo mavambo mugakava rekunyora kwake uye nepfungwa yaakapa kuhupenyu hwake.
Basa rake rekunyora raigara richishandiswa pasi pekuitwa kwecuaderna kuburikidza. Izvi, kudzamara afa muSan Millan de la Cogolla, pakati pa1264 kana 1268.
Utatu hwenhetembo neshanduro
Kuenzanisa kwaBerceo kune kurudziro inozivikanwa kubva mumabhuku matsvene, pamwe nemweya unoshamisa wechitendero. Mabasa ake anoumbwa noutatu hwenhetembo mavakamira.
Nezvikonzero zviri pachena, kuita kwake nhetembo kwakapesedzwa nhevedzano yeshanduro dzenziyo dzechechi dzaakaita.
Nguva pane vatsvene
Inoshanda senge Hupenyu hweSan Millán, Hupenyu hweSanto Domingo de Silos, Nhetembo yeSanta Oria uye Kufira kutenda kwaSan Lorenzo, gadzira iyi nhanho yekutanga. Inozivikanwa nekusimbisa nhoroondo dzevanyori vayo. Tsananguro dzayo uye minstrel zvinowirirana zvaive zvakavakirwa pamaLatin mabhesheni uye tsika dzemamongi.
Mune ino nhanho yekuzvipira kuMhandara Maria, Berceo akawana matatu mazita ari akakosha zvidimbu: Kurumbidzwa kweMukadzi wedu, Kuchema kweMhandara uye Zvishamiso zvaMai Vedu, rekupedzisira iri raive basa rake rine mukurumbira. Iyo inomira pachena kune ayo akanaka uye echinyakare mavhesi kuna amai vaJesu.
Iyi nhevedzano yenhetembo makumi maviri neshanu dzinotsanangura Maria sehunhu hunoreverera pamberi paMwari kune mumwe wevatendi, vachiita zvishamiso zvakasiyana siyana zvechikumbiro chimwe nechimwe. Kubudikidza nhetembo iyi chishuwo chaGonzalo de Berceo chaive chekusimudzira kutenda munharaunda.
Munguva ino, mabasa ezvinyorwa akadai se: Yezviratidzo zvinoonekwa pamberi peKutongwa Kwekupedzisira y Zvechibairo chemisa, batanidza hutatu hwenhetembo hwemunyori ane mukurumbira uyu. Kuburikidza nemusoro wekutanga unotaura pamusoro wenyaya wekuzivikanwa kwekupedzisira mutongo webhaibheri nezviratidzo zvakasiyana izvo nyika ichave nazvo pamberi pechiitiko ichi.
Kune rimwe divi, mune rechipiri basa, Berceo akataura zvakadzama chiratidzo chematanho emisa. Akaitawo rondedzero yemafambiro evapristi, sekunge raive bhuku remanyorerwo.
Zvishamiso zvaMai Vedu, chidimbu (mavhesi kubva muna 1265 kusvika muna 1287)
Zvishamiso zveMai vedu.
“San Miguel de la Tumba imba huru yemamongi,
Gungwa rinokomberedza zvese, Elli akarara pakati,
iyo periglossal logar inotambura rakakura lazerio
mamonki ayo ý anogara mu essi ciminterio.
Mune ino monastery yatakasarudza,
avié yemamongi akanaka, yakanaka yakaratidzwa musangano,
Atari yeGloriosa yakapfuma uye inodhura kwazvo,
mariri mufananidzo wakapfuma wemutengo wakakwira kwazvo.
Chifananidzo chaive pachigaro chake cheushe chakakomberedzwa,
Ini ndakagadziriswa mumaoko ake, itsika,
Iko kuseka kwakamupoteredza, ini ndaive mushe mushe,
samambokadzi waMwari akapfuma akatsveneswa.
Ini ndaive nekorona yakapfuma semambokadzi akapfuma,
yekudyara kwayo kwepfuma munzvimbo yeketeni,
Yakanga yakanyatsogadzirirwa, yemvura yakanaka kwazvo,
Ndanga ndichikosha kupfuura vanhu veessi kupfuura avié vezina ”.
Zadza runyorwa rwemabasa ake
Hupenyu hweSan Millán.
Hupenyu hweSanto Domingo de Silos.
Nhetembo yaSanta Oria.
Kuurayirwa kwaSaint Lawrence.
Kurumbidzwa kweMukadzi Wedu.
Yezviratidzo zvinoonekwa pamberi peKutongwa Kwekupedzisira.
Kubva Ave maris stella.
Uyai Musiki Spiritus.
Kubva kuna Christe, qui lux es et kufa.
Mhandara Saint Auria.
Nhetembo yaAlexander Mukuru.
Hupenyu hwaSan Lorenzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhetembo » Gonzalo de Berceo